We.com.mm - ၂၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကို ရွက်လှေတစ်ခုပေါ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျင်းပခဲ့တဲ့ Selena Gomez
လွန်ခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့မှာတုန်းကဆိုရင် Instagram Queen တစ်ဦးဖြစ်သူ Selena Gomez ဟာ သူမရဲ့ မွေးနေ့ အကြို ပါတီပွဲကို ရွက်လှေတစ်ခုပေါ်မှာ နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Imagine Dragons ရယ် Grace VanderWaal တို့နဲ့ ဆင်နွှဲပြီး ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။ Selena ဟာ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့မှတုန်ုးက ၂၆ နှစ်ပြည့်သွားတာဖြစ်ပြီး ထိုပွဲမှာတော့ တခြား သူတွေဖြစ်တဲ့ Connar Franklin, သူမရဲ့ Close Friend တစ်ဦးဖြစ်သူ Raquelle Stevens နဲ့ Caleb တို့အတူရှိနေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
မွေးနေ့ပွဲမှာ တူတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း “Another year down.. Thank you for all the bday love. I couldn’t be more appreciative of you and my best friends for celebrating with me. I love you guys like crazy! God bless!” ဆိုပြီတော့လည်း ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာဆိုရင် Selena ဟာ Back To You ကိုနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားပြီး မကြာခင် ပြသတော့မယ့် Hotel Transylvania3ရယ်နဲ့ The Dead Don’t Die တို့ရုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ အပြင် သီချင်းအသစ်တွေလည်း Record လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီးလို့လည်း သိရပါတယ်။
3 days ago by Cherry Mon